विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न - राष्ट्रपती भवनमा देशको राष्ट्रपती बस्नुहुन्छ कि विद्या भण्डारी ? Canada Nepal
विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न - राष्ट्रपती भवनमा देशको राष्ट्रपती बस्नुहुन्छ कि विद्या भण्डारी ?
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलिसम्म नयाँ सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत राष्ट्रपती भण्डारीको कदमको विरोध गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रपति भवनमा देशको राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ कि केवल विद्या भण्डारी मात्र बस्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने - राष्ट्रपती भवनमा मेरो देशको राष्ट्रपती बस्नुहुन्छ कि केवल विधा भण्डारी बस्नुहुन्छ ?"
नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्न शुरु, नयाँ सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान
उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्
उनले भने - "प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन ? संस्था सेरोमोनियल हुनु र खल्तिको हुनु एउटै हो ? संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक छ !"
जेठ ६, २०७८ बिहिवार २२:१४:४३ बजे : प्रकाशित